आफैले आफूलाई बौलाएको घोषणा गरेका बाबुरामको हालत कांग्रेसको के होला झन् यो निर्णय सुनेपछि ?
त्यसकारण तत्कालीन नयाँ शक्तिलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता थियो’, थापाले भने,’ तर अब गोरखाका नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले यो पटक रुख चिन्हबाहेक अरु कुनैमा मत हाल्नु पर्ने छैन।’
पुस २४, २०७८ ९:३४
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब पार्टीका कार्यकर्ताले रुखमा मात्रै भोट हाल्ने बताएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसको समेत सहयोगमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनाव जितेको सन्दर्भमा थापाले यसो भनेका हुन्।
कांग्रेस गोरखाको नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले भट्टराईप्रति लक्षित गर्दै यसो भनेका हुन्। केन्द्रमा बाबुराम अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन रहेको अवस्थामा उनले अब कांग्रेसले कसैलाई नसघाउने पनि तर्क गरे।
‘२०७४ सालको चुनावमा एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति हुँदा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेका थिए। त्यसकारण तत्कालीन नयाँ शक्तिलाई समेट्नु पर्ने बाध्यता थियो’, थापाले भने,’ तर अब गोरखाका नेपाली कांग्रेसका साथीहरुले यो पटक रुख चिन्हबाहेक अरु कुनैमा मत हाल्नु पर्ने छैन।’
२०७४ को चुनावमा बाबुरामले कांग्रेसको मतबाट जितेर कांग्रेसलाई नै धोका दिएको पनि थापाले बताए। ‘कांग्रेसको मतले जितेर गएको भोलिपल्ट हाम्रो पार्टीलाई संग्रहालयमा पुर्‍याइदिन्छौँ भनेको हामीले बिर्सेका छैनौँ’, उनले भने, ‘यो कुरा चाहेर पनि बिर्सिँदैनौँ।’
उनले आगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन टिकाएर जाने बताए। ‘यो गठबन्धन आउँदो चुनावसम्म राम्रोसँग टिकाउँछौँ। कांग्रेस सभापति नेतृत्वको सरकार शानदार रुपमा सफल बनाउँछौँ’, उनले भने, ‘संसदको अवरोधलाई हामी चिर्छौँ। संविधानलाई तलमाथि हुन दिँदैनौँ।’
यस्तै उनले संसद खोल्न एमालेसँग वार्ता गर्ने र सहमतिमा नआए भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसदलाई बन्धक बनाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गाउँ गाउँ डुलेको भन्दै अब धेरै समय संसदलाई बन्धक राख्न नसकिने उनले बताए ।
आफूहरु सरकार चलाउने पार्टी भएकोले झुक्नुपर्छ भने झुक्ने, विनम्र हुनुपर्ने भए हुने भन्दै उनले केही कुरा मिलाउन सक्ने भए मिलाउँऔँ भने ।तर हात्ती किन्देऊ भने हात्ती किनिदिने, झोला किनिदेऊ भने झोला किनिदिने, तर हात्ती झोलामा हालिदेऊ भन्दा नसकिने बताए । अब गाउँ आउने हरेक सांसदलाई नागरिकले पहिले संसदको अवरोध हटाएर त्यहाँ बोल अनि मात्र गाउँ आऊ भन्नुपर्ने थापाले बताए ।
‘होइन भने सांसद बनेको छ, तलब भत्ता आएकै छ, । संसद गयो, घण्टी बज्यो कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद भन्यो । के को लागि भनेको पनि थाहा छैन’ उनले भने ।
महामन्त्री थापाले संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध हो भन्ने पुष्टि गर्न योजनावद्ध ढंगले संसद अवरोध गरिएको आरोप लगाए । एमालेले एक वर्षसम्म संसद अवरोध गर्ने र संसदले काम गर्न सकेन भनेर चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेको थापाले आरोप लगाए ।